Robert Lewandowski oo talaabo yar ujira inuu noqdo Xidiga ugu mushaarka badan Caalamka & Wakiilkiisa oo saxaafada la hadlay | Laacibiin & Baahin – News, Sports, Views, Entertainment, War On Terror, Health and Social Affairs	Tuesday, January 17th, 2017	Home
Robert Lewandowski oo talaabo yar ujira inuu noqdo Xidiga ugu mushaarka badan Caalamka & Wakiilkiisa oo saxaafada la hadlay
Jan 7, 2017 - Aragtiyood	January 07 ( Laacibiin) -Robert Lewandowski ayaa loo soo bandhigay fursad uu ku noqon karo ciyaaryahanka ugu mushaarka badan aduunka haddii uu u dhaqaaqo Horyaalka Shiinaha,sids uu xaqiijiyay wakiilkiisa.
Cezary Kucharski ayaa sheegay in mushaarka loo soo bandhigay weeraryahanka Bayern Munichuu ahaa midkii ugu badan kadib Carlos Tevez oo heshiis £32 milyan-sanadkii ah ugu dhaqaaqay kooxda Shanghai Shenhua.
Waxa uu sheegay: “wakiilka xiddigan in xiriir wanaagsan oo dhanka dhaqalaha ah ay ka heleen Horyaalka Shiinaha islamarkaana ay ka fakirayaan waxa dhici kara oo kaliya.
“Magaca kooxda dooneysa lama shaacin, laakiin haddii ‘Lewi’ go’aansado inuuku biiro Shiinaha waxa uu mushaar ahaan u qaadan doonaa £ 35m, taas oo macnaheedu yahay in ka badnaan doono Carlos Tevez.
Wakiilka Weeraryahanka reer Poland ayaa intaa ku daray in ay ka fakiri doonaan kaliya sidii ay u qaadan lahaayeen go’aam ay ugu dhaqaaqaan Bariga Fog mustaqbalka dhaw.